ရခိုင်အရေး အစိုးရ ကိုင်တွယ်မှု ညံ့ဖျင်းသည် | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| October 27, 2012 | Hits:12,246
| | တကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားလာသော ရခိုင်ပြည်နယ် ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု လုံးဝ ကင်းမဲ့နေကြောင်းနှင့် နေပြည်တော်အစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှု ခရီးမတွင် အရာမရောက်ခဲ့ကြောင်း အထင်အရှား ဖြစ်စေခဲ့သည်။
40 Responses	LeaveaReply Cancel reply
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> CBT October 27, 2012 - 5:58 pm	I can’t believe you, as most of these cases are always started by Arakanese..
Reply	snow October 27, 2012 - 7:03 pm	တင်ပြချက်ကိုထောက်ခံတယ်။
Reply	myo min aung October 27, 2012 - 11:13 pm	စစ်အုပ်ချုပ်ေ၇းကိုမလိုလားဘူး။အစိုး၇ပဲဖြေ၇ှင်းပါ။အဆင်ပြေပါလိတ်မယ်။
Reply	Buddhism October 27, 2012 - 11:23 pm	အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကို ထောက်ခံပါတယ် ။ အမြန်မငြိမ်းနိုင်ရင် အခြားဒေသတွေကိုပါ ပျံ့နှံ့မှာစိုးရိမ်ရတယ် ။ စစ်တပ် ကအင်အားကြီးမားတော့ သူ့ကိုလတ်တလောတာဝန်ပေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံးဘဲ ။ စစ်တပ်က အပြောအဆိုခံရမှာ ကြောက်ပြီး တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်လုပ်နေရင် ပြဿနာကတာရှည်သွားနိုင်တယ် ။ ရန်ကုန် ၊ မန္တလေးလို မြို့ကြီးတွေကို မကူးစက်လာခင် အမြန်ဆုံးတားဆီးပေးဖို့လိုတယ် ။
Reply	thazin October 27, 2012 - 11:42 pm	ယခုလိုဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများမှာ နိုင်ငံတကာက မျက်နှာရရေးတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်ပြီးသည့် တစ်ဖက်စောင်းနှင်း ပြောဆိုရေးသားကြသည့် ဧရာဝတီလို သတင်းဌာနများ၏ လုပ်ရပ်များလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
Reply	jonybatun October 28, 2012 - 2:41 am	Mr. Editor!
Thank you very much for your articles. It should go forward inademocratic way
to reform the country. I like your opinion and the way.
Reply	moe October 28, 2012 - 12:19 pm	Oh..you are foolish guy’ Snow’.How you think about that.Firstly this army government released them because of want to tell you like this.You must be read more.
Reply	လူသား October 28, 2012 - 12:35 pm	အခုမြန်မာပြည်မှာ ကုလားတွေကဘုန်းကြီးတွေကို တွေ.ရင်ကြောက်နေကြပြီး ဘုန်းကြီးတွေကလည်း ကုလားတွေကိုတွေ.ရင် ရန်သူတစ်ယောက်လို ကြည့်နေကြတယ်။
ဒီအခြေအနေက မြန်မာပြည်အတွက်မကောင်းပါဘူး။ ဘာသာတရား တစ်ခုပြန့်ပွားဖို့အတွက်
ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ သာသနာပြုပုံကို အတုယူကြပါ။ဘယ်ဘုန်းကြီးတပါးမှ ကုလားတစ်ယောက်ရဲ့်အိမ်သွားပြီးသာသနာပြုဖို့မစဉ်းစားသလို ဘယ်ကုလားဗလီဆရာတစ်ယောက်မှလည်း တခြားဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဆီသွားပြီး သာသနာပြုတာမရှိပါဘူး။တစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်းပြီးဘယ်သူကဘာဘဲပြန်ပြောပြော ပြုံးပြုံးလေးနဲ့လက်ကမ်းစာစောင်ဝေငှနေတဲ့ခရစ်ယာန်သာသနာပြုသူတွေကိုသာ
Reply	ထူးအောင်မွန် October 28, 2012 - 3:51 pm	သမတကြီးရေ. တရခံ မသိ့သေးရင်ပြေားပြမယ်
Reply	မေမေး October 28, 2012 - 4:16 pm	တနိုင်ငံလုံးကို စစ်အာဏါသိမ်းခြင်ရင်လည်း သိမ်းလိုက်ပေါ့
ဘာဖြစ်လို့ မိ့သားစု တွေရဲ့ ဘဝတွေ ပျက်အောင်လုပ်တားလည်း
Reply	sawlwin October 28, 2012 - 4:51 pm	The main problem maker is the government. If they wish, they can stop the violation completely within one week. For example, Bangladesh government totally stop the riot which occured in Cox Bazaar between Muslims and Maramagyi within2days. Now it is lasting and again erupting and spreading to all towns. The government has to stop it by restoring rule of law without discrimination.
Reply	zaw kind October 29, 2012 - 8:14 am	တသက်လုံး တိုင်းပြည်က ကျွေးထားတဲ့ စစ်တပ်ကို ဘယ်နေရာသွားသုံးမှာတုံး၊ ဒီလိုနေရာမျိုးမသုံးလို့။ ဖြစ်ပြီးမှ စစ်တပ်ချတာ ဘာလုပ်မှာတုံး၊ သေပြီးလောင်ပြီးနေပြီ။ မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်လို့မရဘူးလား။ တရွာကို စစ်သား ၁၀၀နှုံး တပ်စွဲပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ မရဘူးလား။
ဒီနေ့ရိုက်တာက ပို့တဲ့သတင်း စင်္ကာပူ Straits Time မှာပါလာပြီ။ မွတ်စလင်ကို၊ စစ်တပ်နဲ့ ရခိုင်ကချောင်ပိတ်ချနေတယ် လို့ရေးထားတယ်။ ဒီသတင်းက ကမ္ဘာကိုပြန့်သွားပြီ။ ဗမာပြည်က မွတ်စလင်တွေက အစ်နေ့ ကျင်းပလို့မရဘူးဆိုပြီး ကြေညာထားတယ်။ မကြာခင်မှာ အစွန်းမွတ်စလင်တွေ လမ်ပေါ်တက်ပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ဆန္ဒပြကြတော့မယ်။ မြန်မာအစိုးရကြောက်ရမှာက နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်ဘူး။ ဒီပွဲမှာ။ စစ်သွေးကြွ အစွန်းရောက်မွတ်စလင်တွေဘဲ။ စောစောစီးစီး ကြိုတင်ကာကွယ်၊ မထိမ်းသိမ်းနှိုင်ယင်၊ ဒုက္ခ အကြီးအကျယ်ရောက်တော့မယ်။
ဒါမှမဟုတ်၊ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ဟာ ဗမာပြည်နဲ့မတန်ဘူး၊ စစ်အာဏာရှင်ဘဲ ကောင်းတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြချင်တဲ့ သူတွေ သေချာရှို့နေသလား…
သမ္မတကြီး ပျော့စိစိလုပ်နေလို့ မရတော့ဘူး…
Reply	ကိုကို October 29, 2012 - 3:23 pm	မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ရခိုင်အရေးပေါ်ကိုင်တွယ်ပုံကို ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလုံးဝအားမရပါဘူး။ ကြောက်သလိုလို၊ရွံ့သလိုလိုနဲ့ တုံ့နှေးတုံ့နှေးလုပ်နေပုံများ မသိရင်ဆင်ကြံကြံနေသလားမှတ်ရတယ်။ တကတဲ။ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးမှာလည်းအားရစရာလုံးဝမရှိဘူး။ နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာပြည်နာမည်ဆိုးထွက်စေမဲ့သတင်းတွေ၊ ရိုဟင်ဂျာခေါ်ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့လုပ်ကြံသတင်းတွေချည်းပဲ တွေ့တွေ့နေရတာဒေါပွစရာကောင်းတယ်။ ဘာ့ကြောင့်မြန်မာအစိုးရရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေက နိုင်ငံတကာကိုရောက်အောင်သတင်းမပို့နိုင်ပါလိမ့်နော်။ YOUTUBE မှာဆိုရင်လည်း ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့လှိမ့်လုံးတွေအပေါ်မျက်စိမှိတ်ယုံပြီး မလေး၊အင်ဒို တို့က မူဆလင်တွေ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုပတ်ပတ်စပ်စပ်ဆဲထားလိုက်တာများ ပြန်ဆဲချင်လိုက်တာ အူထဲအသည်းထဲတောင်ယားတယ်။ စိတ်ထဲကသိကအောင့်ဖြစ်စရာကြီး။
Reply	robert October 29, 2012 - 11:34 pm	ဟုတ်ပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် ကိုယ့်နိုင်ငံသား ကိုယ့်လူမျိုး ရှမ်း ကချင် တွေကျတော့ ရပ်ရပ်စက်စက် သတ် စော်ကား ထင်ယောင်ထင်မှား ဥပဒေ တွေနဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် အဲဒီမှာလည်း ဒုတ်ခသည်တွေ အများ ကြီး ခုလည်း ရခိုင်မှာ လုပ်သင့်တာကို ကြိုကြိုတင်တင်မလုပ်ဘူး အားလူံးလွန်ကုန်မှ သေကုန်မှ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေဖြစ်မှ ရှိစုမဲ့စုလေးတွေဆုံးရှံးကြရတော့ မှ စရုံပဲရှိသေးတယ် ဟိုးလွန်လေပြီးတဲ့အချိန်တုန်းထည်းက သိတဲ့ ပြည်သူတွေကဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားပါလို အချိ်န်တွေတော်တော်ကြာကြာအော်ခဲံ့ကြတယ် အော်တဲ့လူတွေကိုပက်ပက်စက်စက်သတ်တယ် အချိ်န်ကြာကြာ ချူပ်နှောင်ထားကြတယ် အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေသေကြ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲံ့အချန်တွေကုန်လွန်ခဲ့ကြ၇တယ် နောက်ဆုံူးးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကို မသွားဘူးလား ဒီလမ်းကြောင်းပဲသွားတာပဲ စာမှ မတတ်ကြတာကိူ အဆင့်မှီတဲ့ပညာရေးစနစ်ကစာလောက်ပဲတတ်ကြတော့ အဖိုးအိုကြီးတွေလိုပဲ တုန်ဆိုင်းတုန့်ဆိုင်းနဲ့ အုပ်ချုပ်လုတွေကလည်း အဖိုးအိုကြီးတွေကိုး
Reply	robert October 29, 2012 - 11:39 pm	ဟုတ်ပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် ကိုယ့်နိုင်ငံသား ကိုယ့်လူမျိုး ရှမ်း ကချင် တွေကျတော့ ရပ်ရပ်စက်စက် သတ် စော်ကား ထင်ယောင်ထင်မှား ဥပဒေ တွေနဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် အဲဒီမှာလည်း ဒုတ်ခသည်တွေ အများ ကြီး ခုလည်း ရခိုင်မှာ လုပ်သင့်တာကို ကြိုကြိုတင်တင်မလုပ်ဘူး အားလူံးလွန်ကုန်မှ သေကုန်မှ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေဖြစ်မှ ရှိစုမဲ့စုလေးတွေဆုံးရှံးကြရတော့ မှ စရုံပဲရှိသေးတယ် ဟိုးလွန်လေပြီးတဲ့အချိန်တုန်းထည်းက သိတဲ့ ပြည်သူတွေကဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားပါလို အချိ်န်တွေတော်တော်ကြာကြာအော်ခဲံ့ကြတယ် အော်တဲ့လူတွေကိုပက်ပက်စက်စက်သတ်တယ် အချိ်န်ကြာကြာ ချူပ်နှောင်ထားကြတယ် အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေသေကြ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲံ့အချန်တွေကုန်လွန်ခဲ့ကြ၇တယ် နောက်ဆုံူးးတော့ဒီလ
Reply	မင်းကြီးညို October 29, 2012 - 11:57 pm	ဦးခင်ညွန့်က စစ်တပ်မှထုတ်ပယ်ထားတာကြာပြီပဲ။ အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်လာတာတောင်မကြာ
သေးဘူး ဘာမှသြဇာအရှိန်အ၀ါမရှိတော့ဘူး။ ဂျာနယ်တွေမှာလဲဦးခင်ညွန့်အကြောင်း မပါတာ
အတော်ကြာပြီ။ ဘာကြောင့်များ ဦးခင်ညွန့်ကို ဒီပဋ္ဋိပက္ခထဲကိုဆွဲထည့်ရတာလဲ မသိလို့ပါ။ ဟိုး
အရင်တုံးကဆိုရင်တော့ အခုကအစိုးရအဖွဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားပြီလေ။ သူနဲ့မဆိုင်တော့ဘူး
သူ့ဟာသူ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာ လုပ်နေတာပါ။
Reply	Khin Nyunt November 4, 2012 - 1:22 am	Yes, Please tell them I am innocent. I never do any bad thing in my life. I swear. My record is clean. I don’t know why people hate me.
Reply	Maung Lwin October 30, 2012 - 4:03 am	Because Our Government is still controlling by “Stupid Army Generals who had made “Money” from “Illegal Immigrant Muslim Bangalis”, that’s all.
Reply	Aung Kyaw Nyunt October 30, 2012 - 3:45 pm	We learn that Government had now sent large numbers of military and police personnel. This should be done since the first accident happened. Too late.
That means some top level person(s) should be definitely responsible for this time unnecessary accident. They should be accountable which must definitely call for explanation in the Parliament.
And also, those who initiated this unnecessary problems that apparently affect our Country’s economy should be taken action as Immigration and Regional Commanders, otherwise this shameful problems will happen again due to unlawful corruption. Treason to the Country and the Myanmar People.
Reply	အမ October 31, 2012 - 9:05 pm	မင်းကြီးညိခင်ညွန့်အကြောင်းမသိ့တာလား. မသိ့ချင်ဟန်ဆောင်တာလား
သိချင်ရင်. E mail. သို့မဟုတ်. ဖုန်းနံပါတ်တင်လိုက်ပြေားပြမယ်
Reply	Mgmyanmar November 1, 2012 - 7:16 pm	very good
Reply	Thein November 1, 2012 - 8:42 pm	Dear Irrawaddy, can you come to our state and can you stay like photharlay said. Please intend to solve our crisises and please understand what our people want. Mostly your media point to government weakness. That is non senses. I think all of you are our nationalities but all of you cannot think or consider like Myanmar people because of you are stay in out side. If you cannot agree my point of view, all of you are not our Nationalities of Myanmar.Can you dare it? If you dare, you will be not allow to enter our country like Nationality. Thanks for your understanding.
Reply	၈၈ ယောင်ဝါး မဟုတ်တဲ့ ၈၈ကျောင်းသား November 1, 2012 - 11:26 pm	(၁) ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာမင်းကြီးများ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသသို့ သွားရောက်၍ မိသားစု အစုံအလင်ဖြင့် (၂)ပါတ် နေကြည့်စေလိုပါသည်။ (အစွန်အဖျား ကျေးရွာများ မဟုတ်သေးပါ။)
Reply	Fake 88 Student November 4, 2012 - 1:26 am	I am fake 88 student, but I agree with him.
Reply	ပြောချင်သူ November 6, 2012 - 3:47 pm	ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်သွေးကြွမူဆလင်ဆိုတာပဲရှိတယ်
စစ်သွေးကြွဟိန္ဒူတို့၊ စစ်သွေးကြွခရစ်ယာန်တို့၊ စစ်သွေးကြွဗုဒ`ဓသာသာတို့မရှိပါဘူး
Reply	အောင်မျိုး November 12, 2012 - 5:48 pm	မှန်လိုက်လေ
Reply	တားတား November 12, 2012 - 11:26 pm	မှန်ပါ့ဗျာ။ ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့အဲဒီစကားဟာအခုထိမှန်နေသေးတယ်။ ဒါ့အပြင်မြန်မာပြည်က မူဆလင်ဆိုင်တွေအိမ်တွေမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ၇၈၆ ဆိုတဲ့အဓိပ်ပါယ်ကဘာလဲဟင်? ချိတ်မရှိနဲ့နော်၊ တားတားမတိလို့မေးတာပါနော်။
Reply	Zarni Htway January 23, 2013 - 1:37 am	၇၈၆ ၏ အဓိပ္ပါယ်
မွတ်စလင်မ်တို့ သည် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စတင်ရာ၌ မင်္ဂလာရှိစေရန်အတွက် ‘အလွန်တစ်ရာ သနားကြင်နာတော်မူထသော၊ မဟာဂရုဏာတော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူထသော ဘုရားရှင်၏ နာမတော်ဖြင့် (အစပြုပါ၏)’ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော Bismillaheer Rahmaneer Raheem ကို ရွတ်ဆိုလေ့ရှိကြပြီး မူရင်းမှာ အာရဘီဘာသာဖြစ်လေသည်။ (http://en.wikipedia.org/wiki/Basmala)
အာရဘီဘာသာစကား၌ အတိုချုပ်ရေးသားရန် တစ်ခါတစ်ရံတွင် Abjad Numberals အဗ်ဂျဒ် ဂဏာန်းများကို အသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်။ အာရဘီအက္ခရာ (၂၈)လုံးတွင် အလုံးတိုင်း၊ အလုံးတိုင်းအား တစ် မှစ၍ တစ်ထောင်အထိ အောက်ပါအတိုင်း တန်ဖိုးတစ်ခုတစ်ခုစီ ရှိကြပေသည်။ (http://en.wikipedia.org/wiki/Abjad_numerals)
ဤသို့ ဖြင့် Bismillaheer Rahmaneer Raheem တွင်ပါရှိသော အက္ခရာများကို ပေါင်းလိုက်ရာ (၇၈၆) ရရှိလေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အခြားအာရဘ်မဟုတ်သော နိုင်ငံများရှိ မွတ်စလင်မ်များသည် အာရဘီစာကို မရေးတတ်ကြသဖြင့် လွယ်ကူသမှုရှိစေရန် (၇၈၆)ဟုသာ အတိုကောက်ရေးသားကြလေသည်။ ဤသည်မှာ မင်္ဂလာလာဘ်လာဘရှိစေရန် အာရဘီစာ မတတ်သူများက အလွယ်တကူ ရေးသားခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး၊ အခြား မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်မျှ အကျုံးဝင်သက်ရောက်ခြင်း မရှိပေ။ အမှန်ကို စူးစမ်းသူ သစ္စာဝါဒီများအား ရည်ညွှန်းလျှက်
Reply	nyo tun naung November 1, 2012 - 11:28 pm	ဘာမှ ခြေခြေမြစ်မြစ် နားလဲ မလည်.. နောက်ခံအကြောင်း ရင်းတွေ သိမ်မွေ့နက်နဲ တာတွေ သိဘို့တောဝေလာဝေး.. အဖိုးတန် သတင်းဌာ န ကြီး လုပ်နေပြီး ကိုယ့် ကို လူ တကာ အထင်သေး ခံရ အောင် ကိုယ်ဟာကိုယ်ပြန်လုပ်နေတယ်.. ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် လည်း ရေးကြပြောကြ ဦး ဗျ… ခေတ်ကပြောင်း နေပြီ.. ပြည်သူလူထု အများ စု ကကော၊ နိုင် ငံတစ်ကာ အသိုင်း အ၀ိုင်း က အမှန် ကို သိတဲ့ သူတွေကို ပါ စော်ကားနေသလို ဘဲ… မှန်မှန် ကန်ကန် တွေးတတ်တဲ့ လူတိုင်းက မဟုတ်တာ ကို မဟုတ်တာမှန်း သိတယ် ဗျ
Reply	jas November 2, 2012 - 1:43 am	မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမှန်တကယ် စေတနာကောင်းရှိတယ်(ချစ်မြတ်နိုးတယ် လို့ မပြောဘူးနော်)ဆိုရင် ဒီထက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ် ပြန်ရေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးဟာ မညံ့ပါဘူး။ဆရာကြီးလေသံမျိုးနဲ့ စာမရေးပါန့ဲ့ ။မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ဧရာဝတီသတင်းဌာနက လူတွေထက် အဆပေါင်းများစွာတော်ကြ တတ်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခါဆို မြန်မာပြည်သူတွေထံသို့တင်ပြတဲ့ စာမျိုးပဲ ရိုရိုသေသေနဲ့ရေးသင့်ပါတယ်။(အစိုးရကို ညံ့တယ်ပြောလို့ စိတ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်၊ညံ့ချင်လည်းညံ့နေမှာပဲ)
Reply	Stupid November 4, 2012 - 1:30 am	Yea, Irrawaddy. I am not stupid, you know.
Reply	အောင်မျိုးဝင်း November 2, 2012 - 12:09 pm	အခုဖော်ပြတဲ.အယ်ဒီတာအာဘော်ကို ကျွန်တော်အပြည်.အ၀ထောက်ခံပါတယ်။အချိန်မှီ
ကုစားရမှာကို မကုစားဘဲ ထားခဲ.လို. အခုလိုတင်းမာမှု.တွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။နောက်ကွယ်က
ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားသူဆိုတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ အစိုးရက ပိုသိမှာပါ။စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဆိုတာ
လည်းနာမည်ခံသက်သက်ဘဲဖြစ်နေတယ်။အမှန်တကယ် ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို.ခံရပြီး ထွက်ပြေးနေ
ရသူတွေက မွတ်စလင်မ်တိုင်းရင်းသားတွေပါ။ပြီးတော. ဦးနေ၀င်းဖျောက်ခဲ.တဲ.သမိုင်းအမှားကြီ
ကို ယခုအထိလက်ခံထားတာဟာ ဘာကြောင်.ပါလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ.တိုင်းရင်း
သား တချိန်က တကယ်ရှိခဲ.ပါတယ်။
Reply	ပြည်ချစ်သား November 6, 2012 - 3:45 pm	အဲဒီအရင်ကတည်းကနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာပဲဖြစ့်ဖြစ်၊ ဘင်္ဂါလီပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံသားပေးလို့ရတယ်၊ အဲဒါကနည်းနည်းပဲရှိတာ၊ နောက်ပိုင်းခိုးဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကအများကြီးပဲ၊ သူတို့ကိုပါနိုင်ငံသားပေးလိုက်လို့ကတော့ သူတို့မျိုးပွားနှုန်းနဲ့ နောက်ဆယ်နှစ်နောက်ဆို မြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်တော့ဘဲ မရမ္မာအစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်
Reply	Zaw November 2, 2012 - 9:45 pm	The most powerful people in Myanmar are responsible for what so never happened in the country(good or bad).
I think these riots are happened due to the immigration weakness and the nature of islam(certain bad rules had been set to expend their religion)
And I want to know how they are going to establish the infrastructure in that area back to the original status and how they are going to protect this kind of riots from happening again in the future.
Reply	mr TM November 3, 2012 - 9:01 pm	အယ်ဒီတာအာဘော်ကိုနဲနဲဖြည့်စွက်ခြင်ပါတယ်၊ရခိုင်ရေးကိုကိုင်တွယ်တာနှေးကွေးတာမဟုတ် ပါဘူး ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေတာပါ၊တောင်ကုတ်လူသတ်မှုကသက်သေထူနေပါတယ်။ဘင်ဂလားသေ့စ်မှာဖြစ်တဲ့ပြသနာကို၄၈နာရီအတွင်မှာဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်၊ရခိုင်ပြသနာက ၄ လကြာခဲ့ပါပြီအခုထက်ထိသတ်တုံးဖြတ်တုံးပါဘဲရှင်းပါတယ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ပြသနာကိုလိုလား ခဲ့တာပါ။ကြုံတုံး Peace Forum and Press Conference-2012-November ကရခိုင်ဘုန်းတော်ကြီးတပါးရဲ့ဟောပြောချက်……ကုလားဘုရင်သာရခိုင်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ မယ်ဆိုရင်အခုလိုစေတီပုထိုးတွေကျန်ရှိခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး၊….နားထောင်နေသူတွေလက်ခုပ် တွေတီးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီးလူတွေကိုသိစေချင်တာက…..အန္ဒိယနိုင်ငံကိုဗြိတိသျှတွေမစိုးမိုး ခင်ကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဂိုဘုရင်တွေနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမဂိုအင်ပါ ယာထဲမှာဗုဒ္ဒဂါယာ၊ရခိုင်နဲ့ဘင်ဂလားသေ့စ်နိုင်ငံလဲပါပါတယ်။ဗုဒ္ဒဂါယာလဲကနေ့ထိရှိနေပါ တယ်၊ဘင်ဂလားသေ့စ်မှာလဲစေတီပုထိုးတွေအများအပြားရှိပါသေးတယ်၊ကျောက်နက် သစ်နက်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဒရုပ်ပွါးတော်တွေ ပရပိုက်တော်တွေနဲ့အတူမြန်မာပြည်ကလူတွေမမြင်ဘူးသေးတဲ့ဗုဒ္ဒရဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း တွေပါရှိတဲ့ဗုဒ္ဒရှေးဟောင်းမြို့တော်နဲ့ရှေးဟောင်းပြတိုက်တခုဟာဘင်ဂလားသေ့စ်နိုင်ငံကိုမီး လားမြို့မွုင်နာမိုသီး ဆိုတဲ့စစ်တပ် ပိုင် ဧရိယာအတွင်းမှာအခုထက်ထိရှိသေးတာကိုဘင်ဂလားသေ့စ်သံရုံးမှာသွားစုံစမ်းရင်သိရှိရမှာ ဖြစ်ကြောင်းဘုန်းတော်ကြီးနဲ့လက်ခုပ်တီးကြတဲ့လူတွေသိအောင်ရေးလိုက်ရပါတယ်၊ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
Reply	ပြည်ချစ်သား November 6, 2012 - 3:42 pm	မဂိုအင်ပါရာထဲမှာ ရခိုင်မပါဘူး၊ မဂိုဘုရင်တွေဘယ်တုန်းကမှရခိုင်ကိုမသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး
Reply	Soe Nyunt November 6, 2012 - 8:26 pm	It is very easy to blame the government.
Now that way is not popular. Actually, you should
discuss with the wise thoughts.
Reply	မင်းကြီးညို November 7, 2012 - 12:15 am	ပြည်ချစ်သား ပြောတာမှန်တယ်။ မဂိုဘုရင်တွေ ရခိုင်ကို ဘယ်တုံးကမှ နယ်ပယ်မချဲ့ထွင် မသိမ်း
နှိုင်ခဲ့ဘူး။ ရခိုင်ဘုရင်တွေကသာ ဘင်္ဂေါပြည်နယ်(၁၂)ခုကို အချိန်အတန်ကြာ သိမ်းပိုက်နှိုင်ခဲ့
တယ်။ ရခိုင်သွေးကွ ရဲရဲနီတယ်။ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို မနှိမ်ချပါနဲ့။ ငါက ရခိုင်မဟုတ်သော်လည်း
ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားဘိုးဘေးတွေကို နှိမ်ချပြောဆိုတာကိုတော့ မကြိုက်ဘူး။
Reply	kopouk. November 9, 2012 - 11:14 am	အောက်ခြေလူတန်းစား များအနေနဲ့ မွတ်စလင်နဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာ အတူတွဲ ပြီး ၇ပ်ကွက်တွေထဲမှာ နေထိုင်လာခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ. ဘာပြသနာ မှ မဖြစ်ခဲ့ပါ.အခု ၇ခိုင်အေ၇းမှာလည်း အောက်ခြေလူတန်းစားကတော့ စိတ်ဝင်စားမှု နဲပါတယ်. ပါဝင်ပတ်သက်၇ကောင်းမှန်းလည်း မသိပါဘူး.ဒီလိုဘဲ နေ့စဉ် ဘာသာခြားတွေနဲ့ ဈေးအတူေ၇ာင်း ဈေးအတူဝယ် .သွားမြဲ လာမြဲပါ.မီးဆိုတာလည်း ၇ှို့တဲ့လူ ၇ှိပေမဲ့ လောင်စာ၇ှိမှလောင်တာပါ.လောင်တဲ့အချိန် လေကပင့်တော့ ပိုဆိုးတာပေါ့လေ.၇ှို့တဲ့သူ၇ှိပေမဲ့ လောင်စာကုန်၇င်တော့ မီး၇ပ်သွားတာ သဘာဝပါ.ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အနေနဲ့ လောင်စာတွေကို အ၇င်ကုန်အောင်၇ှင်း၇ပါတယ်နောက်ပြီး တခြားကိုမီးမကူအောင် ကာကွယ်၇ပါမယ်.ဒီလို မီး ငြိမ်းသတ်တဲ့ နေ၇ာမှာ နဲနဲကြာခြင်ကြာမယ်.ေ၇များေ၇နိုင် မီးများမီးနိုင်ကိုး.မီးတောက်ကြီးနေတဲ့ အချိန်မှာ ငြိမ်းသတ်တာ ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲနိုင်ပါတယ်.ဆက်ငြိမ်းသတ်ဘို့တော့ လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်.ဒီသဘောတ၇ား အတိုင်းပါဘဲ.၇ခိုင်အေ၇းဟာလည်း တကယ်ကိုင်တွယ် ဖြေ၇ှင်းနေ၇င် .တကယ် နိုင်နိုင် နင်းနင်း ကိုင်တွယ်နိုင်၇င်တော့ မကြာခင် ပြီးသွားမှာ အမှန်ပါ. ဒီ အေ၇းအခင်း ကို အကြောင်းပြပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကေ၇စီ စံ နစ် ကျ ဆုံ့း သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ နဲနဲ အစွန်းေ၇ာက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်.အခုအ ချိန် မှာ အမေစု အပါအ၀င် တိုင်း၇င်းသားနိုင်ငံေ၇းပါတီတွေက ဒီအေ၇းအခင်းကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းကိုင်တွယ် ဖြေ ၇ှင်းပေးဘို့ တောင်းဆိုလာနေပါပြီ.အစုိး၇ အနေနဲ့လည်း ဒါကို လစ်လျူ၇ှုလို့ မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး.ဒါကို အစိုး၇အနေနဲ့ နိုင်ငံေ၇းကစားကွက် တစ်ခုလို သဘောထားပြီး ဖြေ၇ှင်းနေ၇င်တော့ အဲဒီ ၇ဲ့ အကျိုး အပြစ်ကို သူကောင်းကောင်းခံစားသွား၇ နိုင်ပါတယ်လေ.
Reply	Ju nit January 7, 2013 - 11:55 pm	Your suggestion of rakhine matter is very important to solve who is the culprits of that conflict and those culprits is free outside.If the Burmese government will be arrest that culprits,so innocent people of the rakhines are will be stay peacefully.the Burmese government have respontibility to protect the lives of innocent people.